Iindaba - “Ifriji” Yamandulo
Ifriji izise izibonelelo ezinkulu kubomi babantu abaphilayo, ngakumbi kwihlobo elitshisayo yinto ebaluleke kakhulu. Ngokwenyani kwasekuqaleni kweMing Dynasty, iye yaba sisixhobo esibalulekileyo sasehlotyeni, kwaye sasetyenziswa ngokubanzi zizikhulu zasebukhosini.
Ifriji izise izibonelelo ezinkulu kubomi babantu abaphilayo, ngakumbi kwihlobo elitshisayo yinto ebaluleke kakhulu. Ngokwenyani kwasekuqaleni kweMing Dynasty, iye yaba sisixhobo esibalulekileyo sasehlotyeni, kwaye sasetyenziswa ngokubanzi zizikhulu zasebukhosini kwikomkhulu iBeijing. Ewe yayingeyiyo ifriji, kodwa ibhokisi epholileyo ngumkhenkce wendalo.
Ngelo xesha, ifriji ikwabizwa ngokuba yi "emele yeqhwa", eyenziwe ngomthi otyheli weeperile okanye mahogany. Ibhokisi emile isikwere ibonakala ilungile ngomlomo omkhulu kunye nezantsi encinci kunye nehuphu ezimbini zethusi esinqeni. Amakhonkco obhedu abekwe kumacala omabini ebhokisi yokuphatha lula, imilenze emine phantsi kwetreyi yodaka (kwifenitshala yeMing kunye neQing Dynasties, eminye imilenze neenyawo azichukumisi ngqo emhlabeni, kunye nomnye umnqamlezo womthi okanye isakhelo somthi phantsi kwenkxaso , Esi sakhelo somthi sibizwa ngokuba "yitreyi yodaka") ukugcina ukufuma.
Ifriji ayisiyontle kuphela, kodwa uyilo lomsebenzi lunobunkunkqele kwisayensi. Ngaphakathi kwebhokisi yenziwe nge-tin enokukhusela ibhokisi eyenziwe ngomthi ekungcoliseni kwaye emazantsi ebhokisi, kukho imingxunya yokungena kwamanzi omkhenkce emazantsi. Ukongeza, njengoko umkhenkce unyibilika, uthatha umoya oshushu ovela kwigumbi, usebenza njengesixhobo sethu somoya ngoku.
Kuzo zonke iifriji ezishiyekileyo, zimbini kuphela ezishiyekileyo kwiZiko loLondolozo lweMbali eBeijing ezanikelwa nguNks. Lu Yi ngo-1985. Ezi zibandisi zeefriji ezenziwe ngokhuni zenziwe ngocingo - zalukwa, ibhokisi nganye ine-102kg ngobunzima, i-45cm ukuphakama. Umphezulu wekhava kunye nebhokisi yomzimba zihonjiswe ngokupheleleyo ngamasebe asongelweyo iintyatyambo ngobugcisa obugqwesileyo kunye nemibala emihle., Umlomo ecaleni kwengqolowa yokuhombisa, gubungela ecaleni
Ngaphandle "Yenzelwe i-Qing Dynasty Emperor Qianlong" Ngokwenene bubuncwane bobugcisa befriji.
kwikomkhulu iBeijing. Ewe yayingeyiyo ifriji, kodwa ibhokisi epholileyo ngumkhenkce wendalo.
Ngapha koko, le ifriji yomthi ikhankanywe apha ngasentla ayisiyiyo yokuqala e-China. Izikhenkcezisi zokuqala kukholelwa ukuba zizinto ezenziwe ngobhedu ezivela kwiXesha leNtwasahlobo naseKwindla, ezibizwa ngokuba zizixhobo ezinomkhenkce, oko kukuthi ”iBingjian 'ngesiTshayina.
Ngo-1978, iiseti ezimbini zeeseti ezinkulu zewayini yomkhenkce- iBronze uJian Fou, okwabizwa ngokuba yi “Bingjian”, eyayimile ngokufanayo kwaye ihonjisiwe, aba Bingjian babini bavulwa kwingcwaba likaMarquis Yi waseZeng eSuizhou, kwiPhondo laseHubei , kwaye ngoku zigcinwe zodwa kwiHubei Provincial Museum kunye neMyuziyam yeSizwe yase China. Ukuza kuthi ga ngoku, oku kubonakala njengezona zinto zigqibeleleyo zewayini zomkhenkce ezineyona fomu inkulu kunye neyona igqibeleleyo ngaphambi kwexesha le-qin. Le bronze uJian Fou yamkelwa njengeyona "friji" indala eTshayina. "Ice Kam" sisiqulatho esisetyenziselwa ukubamba umkhenkce kwaye sibeke ukutya kuyo ngeentsuku ezishushu.
Ixesha lokuposa: Jul-18-2021